नक्कली फेसबुक आइडी बनाउने युवती पक्राउ
पर्वत, वैशाख ६ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नक्कली आइडी खोलेर अस्लिल अभिव्यक्ति तथा तस्बिर पोस्ट गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवतीलाई पक्राउ गरेको छ ।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशबाट नेपाली बालिकाको उद्धार
कञ्चनपुर, बैशाख ५ । भारत हिमाञ्चल प्रदेशको कौल्हाल पोण्डा साहेवबाट एक जना नेपाली बालिकाको उद्धार गरिएको छ । माईती नेपाल कञ्चनपुर तथा मानव तस्करीविरुद्ध काम गर्ने भारतीय संस्था इम्पावरिङ पिपुल र भारतीय प्रहरीको सहयोगमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १२ वर्षिया बालिकाको उद्धार गरिएको हो ।
प्रहरी कुट्ने गुन्डालाई एसपीकै संरक्षण
काठमाडौं, बैशाख ५। कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगरस्थित भानु पार्टी प्यालेसमा ३० चैतमा आयोजित सांगीतिक कार्यक्रममा सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी टेलीमाथी भएको कुटपिटको घटना मौखिक रुपमा मिलाइएको छ । ६ जनाको टोलीले कमाण्ड गरेर सांगीतिक कार्यक्रमको सुरक्षार्थ गएका प्रहरी सहायक निरीक्षक समुन्द्र पन्तमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई प्रहरी उपरीक्षककै मिलेमतोमा मिलाइएको हो ।
यी हुन् लाजिम्पाटमा कारले हानेर पैदलयात्री ‘मार्ने’, सीसीटीभी फुटेजले समातिए (भिडियो)
काठमाडौं, वैशाख २ । बुधबार बिहान लाजिम्पाटमा रानीबारीका राजु खड्कालाई ठक्कर दिइ भागेका कारचालक रोशन मगरलाई प्रहरीले विहीबार पक्राउ गरेको छ । नयाँवर्षको पूर्वसन्ध्यामा दरबारमार्गस्थित भिक्ट्रीलन्च रेस्टुराँमा अत्याधिक मदिरा सेवन गरी चारजना साथीसहित निस्केका रोशन मगरले लाजिम्पाटमा पैदलयात्री खड्कालाई ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
‘पिसाब फेरेको निहुँमा’ गलबन्दीले घाँटी बेरेर सुखवीरको हत्या
पाँचथर, वैशाख २ । पाँचथरमा आफूतिर फर्केर पिसाब फेरेको निहुँमा साथीको हत्या गर्ने रवि–१ का देउके भनिने अनिलकुमार राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरी विहीबार सार्वजनिक गरेको छ । गत चैत २८ गते धरान प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरलाई बुझाएको थियो ।
९० लाख बराबरको लागूऔषधसहित दुईजना विमानस्थलको गोल्डन गेटबाट पक्राउ
काठमाडौं, वैशाख २ । ‘आइस’ नामले चिनिने लागूपदार्थ एम्फेटामाइनसहित प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धादिङ सत्यदेवी घर भइ काठमाडौंको टोखामा बस्दै आएका नेत्र गुरुङ र चित्र गुरुङ रहेका छन् ।
नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा तीनजना पक्राउ
सुनसरी, वैशाख २ । धरानमा तीनजना नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरी विहीबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धरान–१९ का १९ वर्षीय विकल अधिकारी, धरान–२३ का १६ वर्षीय विकास कालिकोटे र धरान–२६ का ५० वर्षीय गणेशप्रसाद राई रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ ।
हत्याको धम्की दिने दुईजना पेस्तोलसहित पक्राउ
सिरहा, वैशाख २ । लेनदेनको विषयमा विवाद हुँदा पेस्तोल देखाएर ज्यान मार्ने धम्की दिएका दुई जनालाई आज सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
वर्षमा भएका प्रमुख अपराध र अनुसन्धानका नतिजा यस्ता छन् (भिडियो)
काठमाडौं, वैशाख १ । सेन्ट जेभियर स्कूल जावलाखेलका प्रिन्सिपल फादर ग्याफ्नेको हत्या भएको १८ वर्षपछि गत वैशाख ८ गते प्रहरीले फरार अभियुक्त ढालबहादुर खड्कालाई पक्राउ गर्‍यो ।
चुरोट सेवन गर्ने बानी छ ? सावधान ! ४८१८ जना कारबाहीमा (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं, चैत २९ । सार्वजनिकस्थलमा धूमपान तथा सूर्तिसेवन रोक्न प्रहरीले केही समययता कारबाही तीव्र बनाइरहेको छ । बाटोघाटो, पाटी–सत्तल, पार्क, रेस्टुराँ कहीँ पनि धूमपान गर्न पाइँदैन । सार्वजनिकस्थलमा धूमपाान गर्ने बानी छ भने सचेत हुनुहोस् । सरकारले सार्वजनिकस्थलनमा चुरोट सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएकाले कुनैपनि बेला तपाइँ प्रहरीको फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ ।
ब्ल्याङकेटभित्र लागूऔषध, तीनजना पक्राउ